Ihe eji egwu DVD 7.0 Car DVD Player Maka Buick Regal 2014-2016 China Manufacturer
Nkọwa:DVDgbọ ala DVD DVD Maka Buick Regal 2014-2016,Ihe eji egwu DVD 7.0 Car DVD Player Maka Buick,Buick Regal 2014-2016 7.1 Sisiko Car DVD Player
Home > Ngwaahịa > Buick Android Car Dvd > Ihe eji egwu DVD 7.0 Car DVD Player Maka Buick Regal 2014-2016
Ihe eji egwu DVD 7.0 Car DVD Player Maka Buick Regal 2014-2016
Ihe Nlereanya.: KD-8082
Nkwakọ ngwaahịa: 3.5KGS / setị 370 * 330 * 270MM / igbe onyinye
1.7.1 Sistem Car DVD Player Maka Buick Regal 2014-2016 gụnyere gam akporo na wince Car DVD Player, nwere ahụmịhe afọ 7 na imebe, n'ichepụta na ịzụ ahịa Car DVD player, anyị emeela mmekọrịta azụmahịa na ọtụtụ ndị ahịa bara uru si Japan, Russia, Ukraine , Turkey, Spain, Germany, Italy, Iran, Pakistan, Dubai, Israel, Korea, Saudi Arabia, India, Brazil, wdg.
2. Nke a 7.1 Sisite Car DVD Player Maka Buick Regal 2014-2016 dị ọnụ ahịa na eserese ntanetị n'efu: can nwere ike ibudata maapụ ntanetị dị iche iche dị ka maapụ Google, IGO, Sygic na Waze maka n'efu.You nwere ike ịnweta ụzọ ziri ezi na nke kachasị ọhụrụ, data okporo ụzọ ndụ na ọtụtụ ndị ọzọ. Chọta ụzọ gị agaghị adị ọsọsọ ma dịkwa mfe. Ihe nkiri DVD Car Car 7.1 a maka Buick Regal 2014-2016 kwesịrị ịnwale.
3. Ihe nkiri DVD DVD Car 7 nke a bu Buick Regal 2014-2016 bụ maka mbanye aka ekpe na aka nri. Nnukwu ihuenyo, mfe iji aka. Mkpebi ahụ bụkwa 1024 * 600, doro anya. Site na Wifi wuru n'ime, ị nwere ike ịnwe ntanetị site na ịkekọrịta ntụpọ ọkụ ekwentị ekwentị gị. Nwere ike lee ihe nkiri ma lee egwu sitere na DVD a ụgbọ ala. Ihe nkiri DVD DVD Car7 nke a bu ihe eji eme ya Buick Regal 2014-2016 bọtịnụ aka niile.
Picture of 7.1 System Car DVD Player For Buick Regal 2014-2016 :
ọtụtụ android ụgbọ ala maka Duster 2014-2016 Deckless Kpọtụrụ ugbu a
usoro ntụrụndụ ụgbọ ala maka ALTO CELERIO CULTUS 2015-2016 Kpọtụrụ ugbu a
Gam akporo 8.0 redio maka Doblo Kpọtụrụ ugbu a
Android 8.0 igodo ụgbọ ala maka corolla 2016 Kpọtụrụ ugbu a
DVDgbọ ala DVD DVD Maka Buick Regal 2014-2016 Ihe eji egwu DVD 7.0 Car DVD Player Maka Buick Buick Regal 2014-2016 7.1 Sisiko Car DVD Player DVDgbọ ala DVD DVD Maka IX25 2014-2015 DVDgbọ ala DVD DVD maka Octavia 2010-2014 DVDgbọ ala DVD DVD maka Toyota Corolla 2014-2015 DVDgbọ ala DVD DVD maka Vitara 2015 DVDgbọ ala DVD DVD For Benz Smart 2011-2012